GOORYAANKA QASHINKA AH: BOGSIINTA SIFOOYINKA GEEDKA IYO WAXYAALAHA KA HORTAGA - DAAWADA DADWEYNAHA
Sida loo daweeyo qadhaadh qadhaadh: isticmaalka guryaha faa'iido leh ee daawada dhaqameed
Xijaabku waa warshad dilaacsan oo gaadhaysa ilaa laba mitir. Xilliga xagaaga, cawska ayaa ubaxsan ubaxyo yar oo jaale ah oo si qurux badan u roon. Ku dhowaad dayrta midhaha ay u bislaadaan qaabka abuurka. Inta badan waxaa loo tixgeliyaa cawska, kaas oo laga heli karo boodhka, jardiinooyinka khudradda, cagaarka kaynta. Marmarka qaarkood dhirta waxay sameeyaan qulubyo dhan. Tixgeli waxyaabaha faa'iido leh ee geedkan, oo ku saabsan kuwaa yar ee dadku og yihiin, oo ay ku ogaan karaan wixii sixi qorraxda, sida loo qaato si habboon daaweynta cuduro kala duwan.
Caleemaha iyo cawska waxaa ku jira noocyo kala duwan oo waxtar u leh, sida maqaarka, maqaarka, fangaska, faytoncides, fitamiinada iyo asiidhyada dabiiciga ah, cusbada macdanta ah iyo fareeshka, iyo sidoo kale kuwo kale oo badan.
Ma taqaanaa? Dalalka qaar, rootiga ayaa weli la dubay iyadoo lagu darayo gooryaanka geedka iyo geedaha juniper.
Qalabka Faragelinta ee dhirta caafimaadka leh
Sifooyinka Pharmacological waxay si toos ah ugu xiran tahay qaabka kiimikada ee warshadda. Tixgeli sida uu yahay qiiqa waxtarka leh iyo waxa uu yahay caawiyaa:
Heerka garsoorayaasha, gehlen waxay kicisaa shaqada habka dheefshiidka caloosha, waxay kor u qaadaa socodka xabbadda iyo sidaas darteed hagaajinaysaa dheefshiidka.
Carbohydrates la cusbooneysiiyey, oo laga sii daayo saliidaha lagama maarmaanka ah ee Gooryaanka, waxay leeyihiin saameyn bactericidal ah sababtoo ah dhaqdhaqaaqa bayoolojiga.
Capillin hydrocarbon waxaa lagu dhajiyaa tayada fungicidal, sababta oo ah, tanina, waa wax ku ool ah ee cudurada ay sababto fangaska cudurada pathogenic. Dalka Japan, walaxdan waxaa loo tixgeliyaa antibiotic. Ka hor inta aanad bilaabin isticmaalka qorraxda, waa muhiim in la fahmo dhammaan faa'iidooyinka iyo waxyeelada suurtagalka ah iyo in la ogaado sida dhabta ah loo qaato.
Arumin iyo maqnaanshaha waxay leeyihiin saameyn lid ku ah bararka, oo lagu daro lactone - boogaha lidka ku ah. Waxay sidoo kale ka caawiyaan xasilinta jawaabaha jirka ee jirka.
Polysaccharides inta lagu jiro daweynta infakshan aseptic waxay leedahay saameyn anti-bararka.
Xeryaha Terpenoid waxay u hawlgalaan hawlaha nidaamka reticuloendothelial iyo soo saaraan saameyn anti-bararka.
Sida laga soo xigtay farmaajo, saliida muhiimka ah waxay u egtahay xero, iyada oo taas sabab u ah taas waxay leedahay saameyn kufsi ah oo kicinaysa habka dhexe ee neerfaha.
Muujinta dabeecada daweynta ee gorma waa awooda lagu kordhiyo rabitaanka cuntada, si ay u abuurto dareen ah gaajo. Waa mid caan ah isla markaana waqti isku mid ah oo ammaan ah. qalabka daweynta. Waxaa intaa sii dheer, guryaha la ogaado, taas oo suurtagal ka dhigaysa in si sahlan loo abuuro jawi jirka ku habboon noloshada dulinka. Xeedhku wuxuu bogsiinayaa sifooyinka dagaalka ee ka dhanka ah dulin, wuxuu leeyahay saameyn saameynaya, wuxuu kordhiyaa wax soo saarka qufaca wuxuuna kordhiyaa dheecaanka candhuufta. Sababtoo ah saameynta antispasmodic, maraakiinnadu way u kacayaan, sidaas darteed, cadaadiska dhiigga ayaa hoos u dhacaya.
Waxaa jira kiisaska dardargelinta boogta iyo joojinta dhiigbaxa, iyo sidoo kale suuxdinta gudaha. Xijaabku wuxuu leeyahay waxyaabo kale oo faa'iido leh, taas oo ah sababta ay caan u tahay daawada casriga ah iyo dawooyinka dadweynaha.
Isticmaalka dhirta daawada casriga ah
Warshad waxaa badanaa loo isticmaalaa saldhigga wax soo saarka kala duwan daroogooyinka. Tincture ee Gooryaanka, decoction iyo soo saaraha waxaa loo isticmaalaa dhiirigelin dheeraad ah ee rabitaanka cuntada, iyo sidoo kale kordhinta waxqabadka ee xubnaha dheefshiidka. Maanta, dhirtan waxaa lagu daraa halabuurka dhibcaha iyo kiniinnada caloosha, iyo sidoo kale daawooyinka choleretic, kuwaas oo inta badan loo isticmaalo qaab shaaha caadiga ah. Qaababka noocan oo kale ah ayaa loogu talagalay dadka qaba cudurrada daba-dheeraada ee caloosha. Waxaa lagu caddeeyey in ay tahay mid sax ah oo xanuunka ah, xanuunku wuu lumayaa, cunnooyinka cuntada ayaa fiicnaanaya, saxarada waxay ku noqotaa mid caadi ah.
Dhirta badan oo loo tixgeliyo weedka iyo inta badan waxay ku xiran tahay saarista, waxay bogsanayaan guryaha. Waxaad ka heli kartaa qalabka gargaarka degdegga ah ee alaabta ceeriin ah oo ka soo baxaya qoyaan, yamaarug, quinoa, yarrow, feeraha, caruur, cagaha.
Sidee iyo wixii aad u qaadato hidda-soosaaraha
Ka soo bixidda qadhaadh - tiro weyn oo ah midab madow ah oo laga soo saaray cawska oo leh caraf udgoon iyo dhadhan qadhaadh. Marka lagu qasi karo biyo, dhoobo xalka. Qoraa in la qaato koorso saddex jeer maalintii, 20 dhibcood nus saac ka hor cuntada. Geedkeeda geedeed, oo ah soo saaritaankeeda, waxay leedahay isla isticmaalka sida tincture.
Isticmaalka sifooyinka wanaagsan ee tincture
Tincture daciif ah waa wakiil qarsoodi ah oo leh tiro guryaha, sida: antihelminthic, sedative, antispasmodic, antitumor, anti-bararka, xanuunka iyo xitaa jeermiska.
Waa muhiim! Qoryaha ayaa sidoo kale loo isticmaalaa qaab qalalan. Maaddaama ay dhaqaatiirta caafimaadku muujinayaan, inta lagu jiro daaweynta cudurrada qaarkood, saameynta waxaa lagu gaari karaa si dhakhso badan.
Dhakhaatiirtu waxay soo qoraan inta badan qiyaasta daawooyinka soo socda: 20 dhibcood saddex jeer maalintii. Waxaa lagugula talinayaa inaad qaadato daawada 20 daqiiqo cuntada ka hor. Inta badan daaweynta waa 20 maalmood. Si kastaba ha noqotee, dhakhtarka soo xaadiraya ayaa go'aamin doona qiyaasta iyo tirada maalmaha maamulka ee ku salaysan tilmaamayaasha shakhsi ahaaneed. Calaamadaha loo adeegsan karo tincture waa sida soo socota:
Haddii aad ku aragto dulin leh warshadan, waxaad ka takhalusi kartaa iyaga muddo gaaban.
Waxaa loo isticmaalaa sidii loo yaqaan 'choleretic' oo leh dhibaatooyin la xiriira beerka iyo xameetida. Wuxuu aaminsan yahay madoow iyo calool xanuun. Ka qaadista sunta ka timaadda sunta ka dib.
Si aad uga takhalusto daaweynta khamriga maandooriyaha waxaa lagu dabaqaa qaab saafi ah ama caleemo kale. Daaweynta waxaa ugu wanaagsan in lagu sameeyo kormeerka dhakhtarka, maadaama uu goosashadu uusan kaliya ku bogsiineynin guryaha, laakiin sidoo kale ka hortagga.
U qori isticmaalka geedaha si loogu xadgudbo nidaamka taranka, hormoonka ka hortagga iyo dhibaatooyinka wareegga caadada. Intaa waxaa dheer, dhirta waxaa loo qoraa dhiig-baxa uterine, caabuqa cirridka, iyo xitaa myoma.
Waxaa lagu talinayaa daal, neurasthenia, welwel iyo xitaa xishood. Grass caadi u yahay hurdada iyo hagaajinta xasuusta.
Tincture alkolool waxaa loo isticmaalaa in lagu daaweeyo muruqyada inta lagu jiro dhuuqda, taas oo xannuunsan xanuunka wadarta. Waxaa jira xaalado marka xanuunkaasi uu ku yareeyo xanaaqa.
Halabuurka waxaa lagu daraa qubaysyada neuralgia iyo turjumaanka.
Isticmaalka sifooyinka daaweynta ee geedo yaryar ee daawada dhaqameed
Qof kasta oo waligiis wax ka qabtay cuntada guriga ayaa ogtahay qiimaha dawada dabiiciga ah sida geedka asiga ah ee leh sifooyin daawo oo wanaagsan, sidaa darteed tiro badan oo badeecado ah ayaa la abuuraa iyada oo ku saleysan. Si aad u hesho natiijada la rabo, waa muhiim inaad raacdo shuruucda iyo qawaaniinta la aqbalo.
Sidaas sariirtaada ma aha oo kaliya raalli ahaanshaha oo kaliya, laakiin sidoo kale waxay ka caawisaa daaweynta cudurada, ubax dhirta on bogsashada guryaha. Kani waa nasturtium, echinacea, peony, yucca, saxifrage, periwinkle, anemone, gentian, nivyanik, calendula.
Casiirka waxaa laga helaa adigoo riixaya dareeraha caleemaha iyo jirridda dhirta. Waxaa lagu talinayaa in laga soo saaro ilaa cawska uu bilaabay inuu ubaxdo. Dhakhaatiirta dadku waxay aaminsan yihiin natiijooyin wanaagsan, sida sida caadiga ah ee mareenka caloosha iyo mindhicirrada, ka-saarista mindhicirka mindhicirka weyn iyo kordhinta dheecaanka dheecaanka, waxaa la heli karaa haddii la qaato saddex jeer maalintii iyo 1 tbsp. Qaadada macnaheedu waa, laga sameeyey juuska ee caleemo iyo malab. Tani waa in la sameeyaa isla markiiba ka hor intaadan cunin.
Waa muhiim! Waa mamnuuc in aad bixiso geedo yaryar oo yaryar. Xitaa qiyaas yar oo yar ayaa keeni kara saameyn xun oo caafimaad daro.
Fududeynta iyo tinctures
Faafinta bogsashada, oo si madaxbannaan loogu diyaariyey sida ku qoran warqadda daawada ee soo-jeediyey ee hoos ku qoran, waxay ka caawineysaa in laga saaro qufaca iyo inta badan cudurka faafa ee fayruuska ah, laakiin carruurta looma daaweyn karo daroogadaas daroogada leh. Si loo bilaabo daaweynta qorraxda, waxaad u baahan tahay inaad diyaariso faleebo. Waxaad u baahan doontaa 40 garaam oo geedo iyo 350 ml oo ah vodka. Maaddooyinkaas waxaa lagu qasan yahay weel dhalada ah, kaas oo daboolaya dabool leh oo isku qasan. Hadda kusaddii waxaa loo diraa qubeys biyo ah waxaana la qabtaa 20 daqiiqo. Ka dib markii wakhtigii ka soo wareegay, waa la qaboojiyey, kadibna wuxuu u haray 6 saacadood ka dib.Kulalka ka dib ayaa la gooyaa dabadeedna ku shubaa weel kaas oo marka dambe la keydiyo oo loo isticmaalo ujeedada loogu talagalay.
Si ka duwan horudhac hore, tincture aan la kaydin karaa muddo dheer. Natiijooyinka ugu sarreeya, waxaa fiican in la cabo isla markiiba ka dib diyaarinta. Waxaad u baahan doontaa 20 g oo budo ah oo ka soo baxa caleemaha horay loo qaboojiyey ee xaabada, kaas oo lagu shubay 300 ml oo biyo ah. Awoodda daboolka daboolka oo ku adkeyso 25 daqiiqo. Ka dibna la sifeeyo oo loo isticmaalo ujeedada loogu talagalay.
Daawada dadweynaha, sifooyinka bogsashada dhirta sida foxglove, stonecrop, lycra, rosemary duurjoogta ah, suunka lagu maydho, iyo burcadka ayaa isticmaalay isticmaalka.
Nooca nooca daaweynta ayaa loo isticmaalaa bogsashada degdegga ah ee boogaha, boogaha maqaarka, iyo sidoo kale dib u soo celinta epithelium ka dib qabow iyo gubasho. Biyo-daweynta waxaa loo diyaariyaa sida soo socota: farmashiyuhu wuxuu helayaa wax soo saarka qoryaha iyo 10 g oo badeecad ah ku dar 100 ml oo saliid ama qudaar ah. Laguma talinayo in la kaydiyo diyaarintaan, sidaa daraadeed waxaa lagugula talinayaa inaad isticmaasho wakhti gaaban ka dib diyaarinta.
Gooryaanka qashinka ah: khatarta
Inkasta oo tirada badan ee tayada wanaagsan ee badeecadda ku salaysan dixiriga, iyo sidoo kale geedo ay leeyihiin qaar ka mid ah khilaafyada in ay muhiim u yihiin in la tixgeliyo goorta ay go'aansadaan in ay bilaabaan daaweynta daawooyinkan. Kuwaas waxaa ka mid ah daqiiqado:
Galka-goyska yaraanta ama boog-goyska;
dhiigbax gudaha ama dhiig-yarida;
Ma taqaanaa? Saliidda qorraxda, iyada oo ay jirto alaabooyin wanaagsan, ayaa la mamnuucay isticmaalka xilliga uurka. Waxaa jira kiisaska marka la isticmaalo ka dib markii la isticmaalo dhicin.
Ogaanshaha waxsoosaarka dabiiciga ah, waa muhiim in la xusuusto in isticmaalka aan habbooneyn ama xadgudubka qiyaasta uu sidoo kale saamayn xun ku yeelan karo, tusaale ahaan: muuqaalka muuqaalka qalalaasaha, muuqaalka indhaha ama qalooca.
Sida loo iibsado oo loogu keydiyo alaabta ceeriin ee caafimaadka
Gooryaanka sanadlaha ah waxaa lagu iibiyaa farmasiyada, laakiin qof kastaa si fudud ayuu isugu diyaarin karaa.
Si ay u sii wadaan helitaanka ugu badan ee walxaha wanaagsan ee dhirta, waxaa muhiim ah in si wanaagsan loo diyaariyo oo loo kaydiyo. Caleemaha waxaa la goostay ka hor xilligii ubax, waqtiga ugu fiican waa Juun-Juulay. Way jabeen iyadoon la gooyin oo loo diyaariyey qalajinta.
Mishiinka ayaa la gooyaa qeybta labaad ee xagaaga, caarada ayaa loo isticmaalaa daaweynta. Kaliya u hoggaansamida shuruucda diyaargarowga qoryaha cawska ayaa u oggolaanaya in ay hayaan dhamaan sifooyinka daawooyinka.
Qalabka shaqada ku qalaji hooska, qolkuna waa inuu si fiican u hawoqonayaa. Lakabka waa inuusan ka badnaan 5 cm. Waxaa lagu talinayaa in tan lagu sameeyo dhar ama warqad. Cawska qallalan waxaa lagu buuxiyaa bacaha ama baalasha. Waxaad kaydin kartaa wax ka badan laba sano. Qolku waa inuu ahaadaa mid qalalan oo hawo fiican leh.
Hadda waxaad ogtahay in geedka daaqa geedo ma aha oo kaliya bogsiinaya guryaha, laakiin sidoo kale contraindications. Sidaa darteed, waxaad bilaabi kartaa daaweynta kaddib markaad miisaanayso dhammaan macluumaadka la wada yaqaan iyo ka dib markaad la tashato takhtarkaaga.